Renim-pianakaviana iray sy ny zafikeliny nidina avy anaty fiara, teo Ambohimandroso, amin’ny lalam-pirenena fahafito ny talata teo no nofaohana fiara taksibrosy marika « Mazda » iray ka maty tsy tra-drano ilay zazavavy 5 taona fa tsy tana ihany koa ny ain’ilay renim-pianakaviana rehefa tonga tany amin’ny hopitaly. Niezaka mbola nandositra ilay fiara nahavanon-doza fa fiara tsy mataho-dalana iray no nanenjika ka nibahana azy rehefa lasa lavitra.
Nilaza ilay mpamily nanitsaka olona fa tsy nisy hadisoany fa ireto lasibatra no diso tsy nijery. Ny mpandeha tao amin’ilay fiara izay nahavanon-doza anefa nilaza fa efa tany an-dalana mialoha ny loza no efa tsy nisy tsako kodiarana intsony io fiara io ka tsy nahajanona raha nahita tampoka ireto renim-pianakaviana sy ny zafikeliny ireto. Miezaka manala tena mafy ilay mpamily nahavanona ny loza, raha ny filazan’ny fianakaviana fa efa noraisin’ny zandary an-tanana anefa ny raharaha ary ny fitsarana no andrasana amin’ny tohiny ka sarotra ny hanafina ny zava-misy.